Aqalka Sare muu xallin karayaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? – AwKutub News
Aqalka Sare muu xallin karayaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
By awkutubnews September 16, 2018
Leave a Comment on Aqalka Sare muu xallin karayaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Qaar ka mida xildhibaanada Aqalka sare ee loo xilsaaray xalinta khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda dhaxe ayaa gaaray magaalada Garowe.
“Waxaan u babac dhigi karin oo dalka yaalla ma jiro,waxa nooga aadan ee uu dastuurku noo ogol yahay oo danta dalka ay ku jirto dhinac walba ha ahaatee waan u babac dhigi karnaa waana ka adagnahay”ayuu yiri Mr Faroole.
Tags: Aqalka Sare Soomaaliya Wararka
Previous Entry Guddigii Aqalka sare ee xal raadinta oo Maanta ka ambabaxay Magaaladda Muqdisho
Next Entry Sawirro: Itoobiya iyo Ereteriya oo maanta heshiis taariikhi ah ku kala saxiixday magaalada Jeddah